လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ ... တို့မေတ္တာအစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
ဘာတေလုပ်နေတာလဲ .. ဘာတေရှုပ်နေတာလဲ ... ဘာလုပ်လို့ဘာရှုပ်နေမှန်းကိုမတိဖူး .. ကိုယ်ဟာကိုလဲဘာလုပ်ချင်နေမှန်းမတိဖူး .. သေချာတာကတော့ ရူးချင်နေပီနဲ့တူတယ် ..
Posted by ပေါက်ပေါက်ဆုပ် at 1:01 PM2comments
ချောတီးပါ .. အရှုပ်လေးတေလုပ်နေလို့ blog လေးနဲ့အဆက်ပြတ်တွားတယ် ... နောက်ဆို post လေးတေမှန်မှန်ပြန်တင်ဖို့ ကြိုးချားလိုက်အုံးမယ် ... လာလည်ကြတဲ့တူနယ်ဂျင်းတေကို ကျေးဂျူးများဂျီးတင်ပါတယ် ... အားလုံးပဲ ပေါက်ပေါက်ဆုပ် ရဲ့ ဘလော့ခ်လေးတေကိုဖတ်ပီးတော့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့်
Posted by ပေါက်ပေါက်ဆုပ် at 6:10 PM 1 comments
မိုးကလဲ ရွာမလိုမရွာမလိုနဲ့ မည်းနေတာ ကြာပီ ဒီနေ့မှ သေချာပေါက် အပြတ်ရွာတော့တယ် ...
ပုလင်ဆေးမိုးကြီးရွာသွန်းဖြိုးလိုက်တာ မန်းလေးမြို့ကြီးကို ရေလွှမ်းတွားတာပဲ ... မနက်အစောလောက်မှာ စပြီးရွာတာပဲ အိပ်ရာလဲနိုးရော အိမ်ရှေ့မှာရေပြင်ကြီး ပလက်ဖောင်းလဲပျောက်တွားပီ ... ကားလမ်းမလဲ ဘယ်ဆီနေမှန်းမတိဖူး ... တော်တော်ဝမ်းနည်းတွားတယ် ... ဒီလိုရေလျှံနေပုံနဲ့ ဘယ်လိုကျူရှင်တွားရမလဲပေါ့
ခွင့်လှမ်းတိုင်လိုက်တယ် ဟိဟိ .... ဒီနေ့တော့ မိုးအေးအေးလေးနဲ့ ဇိမ်ပဲ မိုးတိတ်ရင် သန့်ဇော်မင်းကြီးရယ်
နှစ်ကူးရယ် ပီရိုရယ် အပ်မိန်ရယ် ခေါ်ပြီး စက္ကူလှေလွှတ်ရမယ်
Posted by ပေါက်ပေါက်ဆုပ် at 9:55 AM 11 comments
သန့်ဇော်မင်းကြီး တတ်ထားတာလဲကြာပြီ ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ ဟန်ပြင်နေတာ ရေးမပြီးတေးလို့ ရေးတာကရေးမပြီးတေးဖူး တတ်ဖို့ကြိုတင်ဘိုကင်လုပ်ထားတယ်
အပ်မိန်ဆီမာ ဟိဟိ … ဒီနေ့တော့ မရေးမပြီး မပြီးမတတ်ရဆိုသလို အပြီးရေးပြီး
တတ်လိုက်ပါအုံးမယ် … ပထမဆုံး သန့်ဇော်မင်းကြီးကို ကျေးဇူး ….
ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ကို သတိတရလေး တတ်ပေးလို့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ဘလော့ခ်လေးလဲ သန့်ဇော်မင်းကြီးတတ်တာရေးပေးရင်း အသက်ဆက်နေရတယ် ဟိဟိ ….. မန်းလေးဆောင်းတွင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးရေးရမယ်ဆိုတော့ ပထမဆုံး ငယ်ငယ်တုန်းက
သင်ခဲ့ရတဲ့ အချုပ်တန်းဆရာဖေ ရေးခဲ့တဲ့ “ ချမ်းပုံမှာ ကမ်းကုန်ရစ်တာမို့ မန်းတုန်အောင်
လမ်းဆုံးကအော်လိုက်ချင် ” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကိုသတိရမိတယ် ….. တခါတလေ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်လဲ အဲလို လမ်းဆုံထွက်အော်လိုက်ချင်တယ် ဒါပေမယ့် ကားတိုက်ခံရမှာ ဆိုးလို့ ဟိဟိ
မန်းလေးဆောင်း ကတော့ ဟုတ်ပါတယ် မနက်စောစောနဲ့ ညပိုင်းတွေဆိုရင်အရမ်းချမ်းတာ … ချမ်းချမ်းနဲ့ ဂွမ်းစောင်ထူထူနဲ့ကွေးလို့ကောင်းမှကောင်း အဲဒီလိုဆောင်းတွင်းဆိုရင် မနက်စောစောထပြီး မန်းလေးတောင်ခြေကျင်တတ်ရတာ ပျော်ဖို့အရမ်းကောင်းတာပဲ တောင်ပေါ်တတ်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ဇောနဲ့ကိုမို့ ဗိုက်ဆာမှန်းမသိရဖူး … အဲတော့တောင်ခြေလဲရောက်ရော် ဗိုက်ကဖြည့်ရသေးတယ် …. တခါတလေ ဒေါ်ရွှေကြက်ပေါင်းခေါက်ဆွဲ … တခါတလေကြရင် မြေအိုးမြီးရှည် … ၀ါးဝါး .. ချမ်းချမ်းစီးစီးနဲ့ စားလို့ကောင်းမှကောင်း အင်း ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ ပင်ပန်းပြီးပြန်အိပ်ပြီပဲ … ဒါတွေကတော့ ဆောင်းတွင်းမနက်တိုင်း လုပ်နေကျဟုတ်ပါဖူး ဆောင်းတွင်း သုံးလလောက်မှာ ၃ ခါလောက်ပဲ လုပ်နေကျလေးတွေပါ ဆောင်းတွင်းဆိုရင် ဒုက္ခရောက်တာ တခုရှိတယ် အဲဒါကတော့ ရေချိုးရတဲ့ ဒုက္ခပဲ … ဟိဟိ ဆောင်းတွင်းမှာဆိုရင် သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော် ရှိတယ် … သီတင်းကျွတ်လပြည့်ညဆိုရင် ကျုံးဖက်မှာ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ မီးရှူးပန်းလှည့်ဖောက်နေကြတယ် … နောက်ပြီး ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပွဲလဲရှိတော့ ကျုံးအရှေ့ဖက် ကျောက်တော်ကြီးဘုရားနားမှာ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာပဲ ….တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ဆိုရင် ပျော်ပွဲစားချင်လို့ပါဆိုပြီး မုန့်ဖိုးတွေလိုက်တောင်းကြတယ် … မုန့်လုံးရေပေါ်လည်စားကြတယ် အဲဒီညမှာဆိုရင် မယ်ဇလီဖူးသုပ်စားရင် ဆေးဖက်ဝင်တယ် ရောဂါကင်းတယ်ဆိုလို့ ည သန်းခေါင် ၁၂ နာရီလောက်လဲထစားတာပဲ အင်း … ဒီဇင်ဘာလမှာဆိုရင် ခရစ်စမတ် ပွဲရှိတယ် … နယူးရီးယားညလေးလဲရှိတယ် …. ထမင်းနဲ ပွဲလဲရှိတယ် …. စာရေးတံမဲပွဲလဲရှိတယ် … နောက်ပြီးကျန်သေးတယ် …. ပေါက်ပေါက်ဆုပ် မွေးနေ့လဲရှိတယ် …. နောက်ပြီးတော့တွေအများကြီး အများကြီးကျန်သေးတယ် … ဆက်မရေးတတ်တော့ဖူး … ဂလောက်ဆိုရင်ရပြီထင်တယ်
သန့်ဇော်မင်းကြီး ဆောင်းတွင်းအကြောင်းကို ချမ်းချမ်းအေးအေးလေးရေးရအောင်ဆိုပြီး
တတ်လိုက်ပေမယ့် ဒီမှာ ယပ်ခက်ပြီးတော့ရေးနေရတယ် ပူလွန်းလို့ ဟိဟိ …. ရေးလို့တော့ပြီးတွားပြီ တတ်စရာရှိတာတတ်လိုက်အုံးမယ်
Posted by ပေါက်ပေါက်ဆုပ် at 7:14 PM5comments
Labels: ဒီလို...ဒီလို tag ခံရတယ်
မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ပိုစ့်လေး ၅ ခု
ဒီနေ့တော့ cbox လေးထဲမှာ သူငယ်ဂျင်း အဟောင်းလေးတွေ အသစ်လေးတွေရဲ့ အော်သံတွေကို ဖတ်နေတာ သန့်ဇော်မင်းကြီးနဲ့ မလေးတို့က တတ်ထားတယ်ဆိုပြီး အော်ထားတာတွေ့လို့ အပြေးလေးသွားကြည့်ရတယ်ဘာတွေများ တတ်ထားပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ ..... ခက်ခက်ခဲခဲတွေဆိုရင်တော့ သေပြီ .... ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ကအရေးအသားက ခက်ကောင်းကောင်းဆိုတော့ .......... တော်ပါသေးရဲ့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်တွေထဲက အကြိုက်ဆုံး ၅ ခုကိုရွေးပေးပါတဲ့ ၅ ခုဆိုတော့ နဲများနဲနေမလားလို့ နဲပါဖူး ၅ခုကြီးများတောင် အများဂျီးပဲဟာ ရှာလိုက်ဖွေလိုက်တယ် ပေါက်ပေါက်ဆုပ် အကြိုက်ဆုံးပိုစ့်လေးတွေကို ......
၁ ။ ဦးပေါ်ဦး နဲ့ ဆရာတော်ဦးဗုဓ် အဲပို့စ်လေးကိုကြိုက်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆရာတော်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေက အဓိပ္ပာယ်လဲရှိတယ် ရီလဲရီရတယ် ဦးပေါ်ဦးကတောင် စကားနိုင်လုမပြောနိုင်လို့လေ
၂ ။ အဖေ ဆိုတဲ့ပိုစ့်လေး ကိုလဲကြိုက်တာပဲ
၃ ။ ဟော့ပေါ့အကြောင်း လေးလဲကြိုက်တာပဲ ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟော့ပေါ့ကိုကြိုက်လွန်းလို့
၄ ။ မြေခွန်လေခွန်ကောက်သောဦးပေါ်ဦး ပိုစ့်လေးကိုလဲကြိုက်တယ် ဦးပေါ်ဦးက ရှေ့ဖြစ်မှာကိုကြိုသိတယ်နဲ့
၅ ။ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ရဲ့အကျင့်(၁၀)မျိုး အဲဒါကျတော့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ရဲ့ ကောင်းတဲ့အကျင့်ရော အကောင်းတဲ့အကျင့်ရော ရေးထားရလို့ သဘောကျလိုက်တာပဲ
ပိုစ့်၅ခုတော့ ပြည့်သွားပြီ ..... မလေး နဲ့ သန့်ဇော်မင်းကြီး ရေ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ရေးပြီးသွားပြီနော် ... ရေးထားတာကတော့ကြာပြီ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ ခုမှပဲတင်လိုက်ရတယ် ....
ဘယ်ဒူကိုထပ်တက်ရမလဲ လိုက်ချောင်းတာ သူငယ်ဂျင်းတွေအကုန်ပြီလုံးရေးပြီးသွားကျပြီ ... ကျန်တဲ့သူငယ်ဂျင်း လေးတွေကျတော့လဲ ပိုစ့် ၅ ခုတောင်မကျော်သေးဖူး ရေးထားတာ .... အဲတော့ တတ်လို့ရတော့ဖူး ..... နောက်မှ စောစောရေးပြီး လူများတွေထပ် ဦးအောင်တတ်ရမယ် ဟဲဟဲ .....
ခုတော့ တတ်ရမယ်လူတွေ့သွားပြီ စတီဗင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် ..... Steven Alexand ကြီးကိုတော့ ဂျောက်ချလိုက်ပြီ ...... ရေးပေးပါ ... ရေးပေးပါ ... ရေးပြီးရင်လဲ လက်တို့လိုက်အုံးနော်
Posted by ပေါက်ပေါက်ဆုပ် at 11:08 AM2comments
၀ါဆိုလပြည့်နေ့က ဘယ်မှသွားစရာ မရှိတာနဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ Skywalk နဲ့ 78 Shopping Mall ကိုသွားကြတာ။ 78 ကိုရောက်တော့ သဇင် ရဲ့ Free Show ရှိတယ်ဆိုတာ သတိရလိုက်တာ။ ကားရပ်စရာနေရာဆိုလဲ မရှိ … ဆိုင်ကယ်ရပ်စရာနေရာဆိုတာလဲမတွေ့ တမြို့လုံးက လူတွေ 78 ကိုရောက်နေသလားပဲ ….. City Mark ထဲမှာလဲလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုး ………. Season မုန့်ဆိုင်မှာလဲ ထိုင်စရာမရှိ … အထပ်တိုင်းလူတွေပြည့်နေတာပဲ … အပေါ်ထပ်က သရဲရထားဆိုရင် ပိုတောင်ဆိုးလောက်အုံးမယ် .. တတ်တောင်မကြည့်ခဲ့ရဖူး …… ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကလဲကွက်တိ ပွဲစချိန်နီးတော့လူတွေကလဲရုံးစုရုံးစုဖြစ်လာတယ် ……အလကားကြည့်ရလို့လားမသိဖူး လူတွေကိုများလိုက်တာ လူကြားထဲမတိုးနိုင်လို့ မုန့်ဆိုင်ထဲ အမြန်ပြေးဝင်လိုက်ရတယ် မုန့်ဆိုင်ထဲတောင်
အလကားပေးနေတဲ့အတိုင်းပဲနေရာလွတ်တောင် မတွေ့ဖူးထသွားတဲ့ လူတွေ့တွေ့ချင်းအမြန်ထိုင်လိုက်နိုင်လို့ တော်သေးတယ်အဲဒီနေ့မှဆိုင်ထဲမှာတော်တော်လူစည်နေတယ် … ခါတိုင်းလည်းစည်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ထိုင်စရာမရှိအောင်အထိတော့ မဖြစ်ဖူး .. ရှိုးလျှောက်မယ့်စဉ်လေးက နိမ့်နိမ့် …. လူတွေကများများ …. မော်ဒန်တွေကလှလှ …. ကင်မရာမီးတွေက တဖျက်ဖျက် အပြင်ကနေကြည့်တော့ တော်တော့ကို ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ် …. တချို့မမြင်ရတဲ့လူတွေကြတော့ တယောက်တလှည့်ဆီထင်တယ် ၀ိုင်းမြောက်ထားပေးပြီးကြည့်ကြတယ် ….. သိပ်မကြာလိုက်ပါဖူး သဇင်ဖျော်ဖြေတော့မယ်ဆိုတော့ အားပေးလိုက်ကြတာ ပထမဆုံး ငါ့ရည်းစားကသူ့ရည်းစားဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့သီချင်းလေးဆိုတယ် ….. အားလုံးသဇင်နဲ့ အတူတူလိုက်ဆိုကြတော့ သဇင်အသံလေးတောင်ပျောက်သွားတယ် … နောက်သေချာနားထောင်လိုက်တော့ အသံကတမျိုးဖြစ်နေတယ်ထင်တာ …… သီချင်း ၁ ပုဒ်လဲဆိုပြီးသွားရော သဇင်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ ပါတဲ့ပြောတယ် ….. အော် ..... ဒါကြောင့်အသံတမျိုးဖြစ်နေတာကိုးလို့ …. နေမကောင်းတဲ့ကြားကနေ သီချင်းတွေ ၆ ပုဒ်လောက်ဆက်တိုက်ဆိုသွားတယ် …… သဇင်လဲဆိုပြီးရော ပွဲကခဏနားမယ်တဲ့ အဲဒီတော့မှ လူနဲနဲနည်း သွားတယ် …… အဲဒီအချိန်မှာပဲ ပိုက်ပိုက် မြန်မြန်ရှင်းပြီး မြန်မြန်ပြန်ဆင်းခဲ့ရတယ် နို့မို့ဆိုပြန်ဆင်းဖို့ မလွယ်လောက်ဖူး
သဇင်ဆိုထားတာလေး ဗွီဒီယိုရိုက်လာခဲ့ပြီးမှ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် မတင်ရတော့ဖူး
Posted by ပေါက်ပေါက်ဆုပ် at 2:04 AM4comments
ပေါက်ပေါက်ဆုပ် ဘလော့ခ်လေး နေပြန်ကောင်းသွားပြီ
ဘလော့ခ်လေးနေမြန်ကောင်းဖို့ ဆုတောင်းသွားပေးကျတဲ့ မမယ်လိုဒီမောင်(or)မမမောင်နဲ့ ကိုစိုင်းစိုင်းကို ကျေးဇူးများကြီးပါတင်တယ်
ပထမဆုံး အသေးစိတ်လေးပေါ့ ဆိုတာ ဖျက်ချင်တာကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးတဲ့ ကိုဘုရင့်နောင်
နောက်ပြီး လိုတာရှိရင် Blog လေးကို ကူညီပြီး ကလိပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကိုရန်အောင်
ကျန်သေးတယ် မအားတဲ့ကြားထဲကနေ ပြောပြပေးတဲ့ကိုနေရာသစ်ကြီး
နောက်ဆုံး ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ရဲ့ Peekaboo လေးကို ပြင်လို့မရသေးမချင်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြ ပြောပြ သင်ပြပေးသွားတဲ့ ကိုဇော်သက်ကြီးတို့ကိုလဲ ထပ်ဆင့်ကျေးဇူး
ပေါက်ပေါက်ဆုပ် ဘလော့ခ်လေးဆီကို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်လာကြတဲ့
သူငယ်ဂျင်းအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးကျေးဇူး............များကြီးတင်ပါတယ် ။
Posted by ပေါက်ပေါက်ဆုပ် at 12:44 AM 1 comments
Blog လေးနေမကောင်းတာ အကြောင်းပြပြီး ပိုစ့်အသစ်မတင်ဖြစ်တာကြာပြီ ဒီကြားထဲမှာ Blog လေးဆီကိုလာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ဂျင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …… နောက်လည်းမကြာမကြာလာလည်နိုင်ပါစေ ….. ခုတော့ဘာပိုစ့်တင်ရမယ်စဉ်းစားမရတာနဲ့ တလောဆီက ၀ယ်တာတဲ့ စာအုပ်လေး အကြောင်းကိုဖောက်သည်ချလိုက်တော့မယ် …
ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ တဲ့စာအုပ်လေးနာမည်လေးက ဆန်းတယ်နော်…. ဆရာတော်
အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရေးထားတာလေ….. စာအုပ်နာမည်လေးဖတ်ပြီးတော့
ဘလိုအဓိပ္ပာယ်ပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားမိတယ် … စဉ်းတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်
ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဖူး …. ပေါက်ပေါက်ဆုပ်စဉ်းစားမိတာကကျတမျိုး ….
ကောင်မလေးတယောက်မှာရည်းစားရှိတာကို သိရက်နဲ့ တခြားတယောက်က
တဖတ်သတ်လိုက်ချစ်နေလို့များ ကောင်မလေးက ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ အဲလိုပြောတာများလား
လို့ထင်တာ တကယ်တန်းတော့မဟုတ်ဖူး …. သူငယ်ဂျင်းတို့လဲ စဉ်းစားကြည့်လေ ဘလို
ထင်တယ်ဆိုတာကို …. အဖြေကိုအောက်မှာဆက်ရေးပေးထားမယ် …. ဟိဟိ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရေးထားတဲ့ ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ဆိုတာလေးက ဒီလို………အဲဒီ ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးက ပြောတဲ့လူရဲ့ နှလုံးသွင်း နဲ့ နားထောင်တဲ့လူရဲ့ နှလုံးသွင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့
ကိုယ့်ကို ချစ်ခွင့်ပန်လာတဲ့လူတယောက်ကို ကိုယ်ကပြန်မချစ်နိုင်လို့ “ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့” လို့
နောက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကို ချစ်ခွင့်ပန်လာတဲ့လူတယောက်ကို ကိုယ်ကချစ်ပေမယ့်
မိဘက သဘောမတူလို့ ၊ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းက သဘောမတူလို့ အစရှိတဲ့
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ချစ်ပေမယ့်လဲ ငြင်းလိုက်တဲ့အနေနဲ့ ပြောတယ်လို့လဲ
အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တယ်တဲ့ …ပြောသူရဲ့လေသံ .. နားထောင်သူရဲ့ စိတ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး သက်ရောက်နိုင်တာပေါ့
ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ဆိုတာကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲလို့ ဒကာလေးတယောက်ကိုမေးကြည့်တော့
“ ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ ၊ ငါကဘုန်းကြီးဖြစ်နေလို့ပါ ” လို့သဘောပေါက်တယ်တဲ့…..
သူလည်းသူအဓိပ္ပာယ်ပေါက်ချင်သလိုပေါက်တာပေါ့… ဘုန်းကြီးတပါးက မိန်းကလေးတယောက်ကို ပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး သူကယူဆတာပေါ့… မိန်းကလေးတယောက်က ပဲဘုန်းကြီးတပါးကို ချစ်ခွင့်ပန်နေသလိုလို …. ချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့အမူအရာတွေပြနေသလိုလို ……. ။
စသည်ဖြင့်….စသည်ဖြင့်…. များကြီးရှိတယ် …. ကျန်သေးတယ်ရေးထားတာတွေ
ဆက်မရေးပြတော့ဖူး … ဖတ်ရတဲ့သူငယ်ဂျင်းတွေပျင်းကုန်မှာစိုးလို့
ဆရာတော် အဓိကပြောတဲ့ ဓမ္မပုံပြင်လေးကို ရေးပြတော့မယ် ……
အဲဒီပုံပြင်လေးက ရတနာပုံခေတ်က ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာတဲ့
အဲဒီပုံပြင်လေးကို ဆရာတော် က နည်းနည်းပြန်ပြုပြင်ပြီးတော့ ပြောသွားတာတဲ့…
တခါတုန်းက ရွာတရွာမှာ “ မိထက် ” ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ် …
နာမည်နဲ့လိုက်အောင်စိတ်ဓာတ်က ထက်တယ် ၊ အသိညာဏ်လဲထက်တယ် ..
မိထက် ရဲ့မိဘတွေက ရွာဦးကျောင်းမှာ ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ပြီးတော့
လှူဒါန်းထားတယ် … ကျောင်းအလှူရှင်တွေဖြစ်တဲ့ မိထက်ရဲ့မိဘတွေက “ ကျောင်းတစ်ခါ ”
တွေမဟုတ်ကြဖူး … “ ကျောင်းဒကာ ” တွေဖြစ်ကြတယ် ….
တချို့က ကျောင်းကိုဆောက်လှူထားပြီး… ရေစက်ချလို့ပြီးရင် လုံးဝလှည့်မကြည့်တော့ဖူး ….. ပစ်ထားလိုက်ကြတယ် …… အဲလိုလူမျိုးတွေကို “ ကျောင်းတစ်ခါ ” လို့ခေါ်တယ် ။ ကျောင်းကို ရေစက်ချတုန်း တစ်ခါပဲသွားတဲ့သူတွေပေါ့…..
ကျောင်းကို တစ်ခါလှူပြီးးပြီးရော ၊ ကျောင်းဆောက်ထားပြီး ပစ်မထားပဲ နဲ့ ကိုယ့်ကျောင်းမှာ
သီတင်းသုံးတဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးပါးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ထောက်ပံ့ပြုစုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမှ “ ကျောင်းဒကာ ” လို့ခေါ်တယ် ။
ကျောင်းကို အမှန်တကယ် အမြဲတမ်းလှူတဲ့ ဒကာပေါ့…..
မိထက်ရဲ့ မိဘများက “ ကျောင်းတစ်ခါ ” တွေမဟုတ်ကြပါဖူး … “ ကျောင်းဒကာ ” တွေ ဖြစ်ကြတယ် ။ သူတို့ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းထားတဲ့ ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ရဟန်းတော်
တွေအတွက် နေ့စဉ်ဆွမ်းပို့ပေးတယ် …..
ဥပုသ်နေ့တိုင်းမှာ မိထက်ရဲ့မိဘတွေရော တစ်မိသားစုလုံး သွားပြီးတော့ ဆွမ်းပို့ကြတယ် ..။
ဥပုသ်နေ့မဟုတ်တဲ့ကြားရက်တွေမှာတော့ မိထက်ကိုပဲ ဆွမ်းပို့ဖို့ တာဝန်ပေးထားတယ် ။
အဲဒီတော့ မိထက်က ဆွမ်းအုပ်ကြီးပိုက်ပြီးတော့ နေ့စဉ်ဆွမ်းသွားပို့ပေးရတယ် …။
ဆွမ်းပို့တဲ့ရက်တွေလဲကြာလာတော့ ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ဆရာတောနဲ့လည်း ရင်းနှီးလာတယ် …… ။ တစ်နေ့တော့ မိထက်က ဘုန်းကြီးကိုမေးတယ် ……။
“ အရှင်ဘုရား ဒီကျောင်းက ဘယ်သူ့ကျောင်းပါလဲဘုရား ”
“ သြော်….မိထက်ရယ်… မင်းမိဘတွေက င့ါကို ရေစက်ချပြီးလှူထားတော့ င့ါကျောင်းပေါ့ ”
နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့လဲမေးပြန်တယ် … ။
“ အရှင်ဘုရား ဒီသင်္ကန်းတွေက ဘယ်သူ့သင်္ကန်းတွေလဲ ဘုရား ”
“ သြော် … မိထက်ရယ် …. ဒကာ ၊ ဒကာမတွေက ငါ့ကို သဒ္ဓါတရားနဲ့ လှူထားတဲ့ သင်္ကန်းတွေဆိုတော့ ငါ့သင်္ကန်းတွေပေါ့ ”
နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ မေးပြန်တယ် … ။
“ အရှင်ဘုရား ဒီသပိတ်က ဘယ်သူ့သပိတ်တုန်း ဘုရား ”
“ သြော်…. မိထက်နှယ် … ငါနေ့တိုင်းဆွမ်းစားနေတဲ့သပိတ် င့ါသပိတ်ပေါ့ ”
နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့လည်း မေးပြန်တာပဲ ….
“ အရှင်ဘုရား ဒီဗီရိုတွေက ဘယ်သူ့ ဗီရိုတွေလဲ ”
“ င့ါဗီရိုတွေပေါ့ မိထက်ရယ် ”
“ ဒီစာအုပ်တွေကရော ဘယ်သူ့စာအုပ်တွေလဲ ဘုရား ”
“ ငါနေ့စဉ်ကြည့်နေတဲ့ စာအုပ်တွေ ငါ့စာအုပ်တွေပေါ့ ”
နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ မေးပြန်ရော …..
ကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ ရေကန်ကြီးကို လက်ညိုးထိုးပြီးတော့ …..
“ အရှင်ဘုရား ဒီရေကန်ကြီးက ဘယ်သူ့ရေကန်ကြီးတုန်း ဘုရား ”
“ မိထက်ရယ် … ငါကိုယ်တိုင် ဦးစီးဦးဆောင်ပြုထားတဲ့ရေကန် ငါ့ရေကန်ပေါ့ ”
“ ဒီသစ်ပင်တွေက ဘယ်သူ့သစ်ပင်လဲ ဘုရား”
“ သြော် …. ငါကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့သစ်ပင် ငါ့သစ်ပင်ပေါ့ ”
အဲဒီလိုနဲ့ မိထက်က ဘယ်ပစ္စည်းကို ဘယ်သူ့ပစ္စည်းလဲလို့ မေးမေး ၊ ကျောင်းထိုင်
ဆရာတော်က ငါ့ပစ္စည်းလို့ အမြဲတမ်းဖြေတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ပတ်ဆယ်ရက်လောက်ကြာ
သွားတော့ မိထက်က မေးပြန်တယ် …
“ အရှင်ဘုရား ၊ အိမ်ရာတည်ထောင်လူ့ဘောင်ကို စွန့်ခွာပြီး တော့ ရဟန်းဘ၀ကို ခံယူ
ထားတာ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲ ဘုရား ၊ အရှင် ဘုရားသင်္ကန်းဝတ်နေတာ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲဘုရား”
အဲလိုမေးတော့ ဘုန်းကြီးက …
“ မိထက်ရယ် ၊ ငါသင်္ကန်းဝတ်နေတာ နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ပေါ့ ”
“ အရှင်ဘုရား နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ ”
အဲဒီစကားကို ခပ်သုတ်သုတ်ပြောပြီး ကျောင်းပေါ်က ပြေးဆင်းသွားတယ် … ။
ကျောင်းပေါ်မှာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတည်း ခေါင်းကုတ်ကျန်နေတယ် …
“ ဒီကောင်မလေး ဒီစကားငါ့ကို ဘာလို့များပြောပါလိမ့် ၊ ငါလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်လို့
တစ်ခါမှ မပြောမိပါဖူး … ချစ်တဲ့သဘောသက်ရောက်တဲ့ အပြောအဆိုလဲ တစ်ခါမှ
မပြောမိပါဖူး … ချစ်တဲ့သဘောသက်ရောက်တဲ့အပြုအမူ အရိပ်အရောင်လဲ တစ်ခါမှ မပြဖူး
ပါဖူး … ဘာလို့များ “ ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ ” လို့ပြောပါလိမ့် ”
အပျိုစင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ‘ ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့’ ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး စားမ၀င်အိပ်မပျော်ဖြစ်သွားတယ် … “ နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ ”
စားလို့မ၀င် ၊ အိပ်လို့မပျော်နဲ့ ရက်နည်းနည်းကြာလာတော့ ပိန်ချုံးလာတာပေါ့ အဲတော့
ကျောင်းမှာရှိတဲ့ ကပ္ပိယကြီးကမေးတယ် ….
“ အရှင်ဘုရား စားမ၀င် ၊ အိပ်မပျော်နဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဘုရား ”
“ မပြောချင်ပါဖူး ကပ္ပိယကြီးရယ် … မိထက်ပေါ့ ”
“ အရှင်ဘုရားကို မိထက်က ဘာတွေလုပ်လို့တုံး ”
“ ဘာမှတော့မလုပ်ဖူး .. ဒါပေမယ့် မိထက်က င့ါကို စကားတစ်ခွန်းပြောသွားတယ် ။
‘ နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင် ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ ’ တဲ့ ငါကလည်းသူ့ကိုချစ်တဲ့အရိပ်အယောင်တစ်ခါမှ
မပြခဲ့ပါဖူး အဲဒီအတွက် ငါဦးနှောက်စားပြီးတော့ စားမ၀င် ၊ အိပ်မပျော်ဖြစ်နေတာပါ ”
“ ဒါဆို ဒီကိစ္စ တပည့်တော် စုံစမ်းမယ် ဘုရား ” ဆိုပြီးတော့ ကပ္ပိယကြီးက ကျောင်းဒကာကြီးကို မေးတယ် ။ ကျောင်းဒကာကြီးကလဲ သူကိုယ်တိုင်မမေးပဲ ကျောင်းအမကြီးကို တဆင့်မေးခိုင်းတယ်
“ နင်တို့မိန်းမချင်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်ပြီးတော့ မေးစမ်းပါအုံး ”
အဲဒါနဲ့ ကျောင်းအမကြီးက တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်ပြီးတော့မေးတယ်
“ လာပါဦး မိထက် ၊ ညည်းက ဘုန်းကြီးကို သွားပြီးတော့ ‘ နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ ’ လို့ ပြောခဲ့တယ်ဆို ”
“ ဟုတ်တယ်လေ အမေရဲ့”
“ ညည်းကဘာလို့ အဲဒီလိုသွားပြောရတာလဲ ။ ဘုန်းကြီးက ညည်းကိုဘယ်တုန်းက ချစ်တယ်လို့ ပြောဖူးလို့တုံး ”
“ မပြောပါဖူး သမီးက ဘုန်းကြီးကို တရားဟောခဲ့တာပါ ”
“ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဘုန်းကြီးကသာ ညည်းကို တရားဟောရမှာ ၊ ညည်းကဘုန်းကြီးကို
တရားပြန်ဟောခဲ့ရတယ်လို့ မိုးကြိုးတွေတော့ပစ်နေပါအုံးမယ် ”
“ မဟုတ်ဖူးလေ အမေရဲ့ ဒီကျောင်းက ဘယ်သူ့ကျောင်းလဲမေးတော့ ငါ့ကျောင်း ၊ ဒီသင်္ကန်းဘယ်သူ့သင်္ကန်းလဲမေးရင် ငါ့သင်္ကန်း ၊ ဒီဗီရို ဘယ်သူ့ဗီရိုလဲမေးရင် ငါ့ဗီရို ၊
ဒီစာအုပ် ဘယ်သူ့စာအုပ်လဲမေးရင် ငါ့စာအုပ် ၊ ဒီရေကန် ဒီသစ်ပင် ဘယ်သူ့ဟာတွေလဲမေး
တော့ ငါ့ရေကန် ငါ့သစ်ပင် လို့ပဲဖြေနေတယ် ”
“ ဘယ်ပစ္စည်းကိုပဲမေးမေး ငါ့ပစ္စည်း ၊ ဘယ်ဥစ္စာကိုပဲမေးမေး ငါ့ဥစ္စာ ဆိုတဲ့ အစွဲတွေကျွတ်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ပါဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ သမီး တရားဟောခဲ့တာပါ ”
အဲဒီတော့မှ ကျောင်းအစ်မကြီးလဲ သဘောပေါက် တစ်ဆင့်ပြန်ပြောလို့ ကျောင်းဒကာကြီးလဲ
သဘောပေါက် နောက် ကပ္ပိယကြီး လဲ သဘောပေါက် နောက်ဆုံးတော့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးလဲ သဘောပေါက်သွားတယ် ။
“ သြော်… မိထက်ပြောတာလည်း ဟုတ်သားပဲ ” ဆိုပြီးတော့ ကျောင်းဘုန်းကြီးလဲ အသိတရား
ပုံပြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ် ခေါင်းစဉ်လေးဖတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားပြီးလာဖတ်တဲ့ သူငယ်ဂျင်းတွေ ပင်ပန်းသွားပီ.....ဟုတ်
င့ါကိုမချစ်ပါနဲ့တဲ့ ဒါပေမယ့် ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ကတော့ ငါ့ကိုပဲချစ်နေသေးတယ် ကြိုးစားလိုက်အုံးမယ်
Posted by ပေါက်ပေါက်ဆုပ် at 1:48 AM0comments
သည်းခံကြပါ သည်းခံကြပါ .... ပေါက်ပေါက်ဆုပ် blog လေး နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ပါ
အသေးစိတ်ပေါ့ ဆိုတာလေးက မရတော့ဖူး ရအောင်တော့ ကြိုးစားနေတာပဲ ဒါပေမယ့် ကြိုးတွေတာ
ကုန်သွားတယ် မရသေးပါဖူး .... သိတဲ့လူလေးများရှိရင် ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ကိုပြောပြပေးပါအုန်း
ပေါက်ပေါက်ဆုပ်လဲ မလုပ်တတ်လုပ်တတ်နဲ့ လျှောက်လုပ်နေတာ ပိုဆိုးနေပြီ ကဂျိုးကဂျောင် ဖြစ်ကုန်ပြီ ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ သူငယ်ဂျင်းများ
တွေ့လားတွေ့လား အောက်ဆုံးမှာ အသေးစိတလေးပေါ့တဲ့ အဒါပေါက်ပေါက်ဆုပ်လုပ်တာဟုတ်ဖူး
သူ့သူပေါ်လာတာ အဒါကို ဖျက်ချင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ
Posted by ပေါက်ပေါက်ဆုပ် at 12:40 AM2comments
မနေ့ကညကြီး ဘူတာကြီး အ၀ိုင်းပတ်နားမှာ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်မစောင်းတဲ့လူတေကို ဖမ်းနေတာတဲ့ …. ညကြီးဆိုတော့ တော်ရုံဆိုင်ကယ်ဦးထုပ် မစောင်းကြဖူးလေ …. စောင်းတဲ့လူလဲရှိတာပေါ့ …. ဒါပေမယ့်တော်တော်ရှားတယ် …နေ့ခင်းတုန်းကတော်တော်ပူတော့ ညမှာလေညင်းခံချင်တော့ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်မစောင်းကြဖူး တချို့ကြတော့လဲ ဆံပင်ပုံပျက်မှာဆိုးလို့ .. တချို့ကြ ……… အကြောင်းအမျိုးပေါ့ …သူများသာပြောနေတယ် ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ကလဲ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်မစောင်းချင်ဖူး.. ဒါပေမယ့်လဲ ဖမ်းခံရမှာဆိုးလို့ စောင်းရတယ် တခါဖမ်းခံရရင် ဒဏ်ငွေကိုက ၁သောင်းကျော်တယ် နှမြောတာပေါ့ မစားရက်မသောက်ရက် စုထားတဲ့မုန့်ဖိုးလေး အလကားပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ …. အိမ်ကလဲပြန်မတောင်းရဲဖူး ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့လဲ … ရှိသမျှလေးတွေ
ရှာကြံခြစ်ချုပ်ပြီး ပေးရတာပေ့ါ …. ( အရင်တုန်းကဆိုရင် ၂ထောင်ကျော်လောက်ဆိုရင်ရပြီ ခုကမူပြောင်းသွားပြန်ပြီလေ…သောင်းချီစောင်ရတာ )
တခါကလဲ ဒီနာလေးပဲဆိုပြီးလိုင်စင်ယူမသွားမိဖူး … လမ်းကြတော့ လိုင်စင်စစ်တာနဲ့တွေ့ရော ပြန်ပြေးလို့ကလဲမရ လေးဖတ်လေးလံပိတ်ပြီးတော့ဖမ်းတာဆိုတော့ … ပြေးလို့လွတ်မှာလဲဟုတ်ဖူး … မလွတ်မဲ့အတူတူအဖမ်းခံလိုက်တယ် (တော်ကြာ ထွက်ပြေးလို့ဆိုပြီး နောက်ထပ် ၁မှုတိုးနေအုံးမယ် )…. အဲတုန်းကတော်တော်ဆိုးတယ် အဒီမှာတင် တခါတဲစောင်မယ်ဆိုတာကိုမရဖူး လူပါတခါတဲခေါ်သွားတယ် ရုံးထဲကို ပိုက်ပိုက်ကလဲမပါတော့ အိမ်ခဏပြန်ယူအုံးမယ်ဆိုပြီး … ဒစ်ဝိုင်းထားခဲ့ရတယ် အိမ်ပြန်ပိုက်ဆံယူပြီး ဖမ်းခံရတဲ့နေရာပြန်သွားရတယ် .. ပြီးတော့မှ သူတို့ခေါ်တဲ့ တိုင်းရုံးထဲလိုက်သွားရတယ် .. ရောက်တာနဲ့ဆိုင်ကယ်ကို တခါတဲ ခြံထဲထည့်ပြီးသော့ခတ်လိုက်တာ … အော် ဆိုင်ကယ်ထောင်ကြတယ်ဆိုတာ ဒါပါလားလို့.............
အဲတုန်းကဆို ဆိုင်ကယ်တွေမိတာများ အများဆို အများကြီးပဲ ….. ရုံးမှာ စောင်ရတာက ၁သောင်း … ဆိုင်ကယ်ပြန်ရွေးဖို့က ၂ထောင် အားလုံး ၁သောင်း၂ထောင်တောင် ကုန်တယ်
၁စီး ၂ထောင်ဆိုတော့ ၁၀စီးကို ၂သောင်း …. အစီး ၁၀၀ ဆိုရင် ၂သိန်း အမလေးးးး
သူတို့များတော့ ပိုက်ပိုက်ရှာရလွယ်လိုက်တာနော် ……
ခုဆိုရင် ညဖက် လိုင်စင်စစ်တွေရှိတာကို တွေ့ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေက ဦးထုပ်မဆောင်းတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြောပေးတယ် တချို့ယုံတဲ့လူကတော့ပြန်ကွေ့သွားတယ်
မယုံတဲ့လူကတော့ လာနောက်နေတယ် ဒီအချိန်ကြီး ဘယ်ကမော်တော်ပီကယ်လာဖမ်းမှာလဲ ဆိုပြီးရှေ့ဆက်သွားတယ် … သွားတော့တဲ့တဲ့ကြီးကိုတွေ့ရော
အင်းး… တာဝန်သိပြည်သူတွေကတော့ သတိပေးပါတယ် မယုံတော့လဲမတတ်နိုင်ဖူးပေါ့ ဟုတ်ဖူးလား
တော်ပြီဆက်ပြောတော့ဖူး ဆိုင်ကယ်တွေပြန်ဖမ်းနေပြီဆိုလို့ အရင်တုန်းက ကံဆိုးခဲ့တာလေး
ဘလော့ပေါ်က မန်းလေးမှာနေတဲ့သူငယ်ဂျင်းတွေလဲ သတိထားကြအုန်းနော် … ညဆို ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်မဆောင်းရင်ပြန်ဖမ်းနေပြီသိလား သတိထားကြအုန်းနော်
Posted by ပေါက်ပေါက်ဆုပ် at 1:20 AM2comments
ခလောက်နို့ ပုံပြင် (3)
ဒီလို...ဒီလို tag ခံရတယ် (2)
အာလူးလေး (ခေါ်) အာလူးပုတ်
သွားကြည့်ဖြစ်သော blog များ